Published : April 24, 2011 | Author : युवराज नयाँघरे
Category : Essay / निबन्ध | Views : 1133 | Rating :
एयरपोर्टको मुखैमा छ झिम्के !<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
दिउँसोको दुईबजे झिम्के उड्दैछ कतार । वरिपरि साथी छन् । अलि-अलि जुँगा उम्रेका केटाहरूको हुलमा छ ऊ । काँचा केटाहरूको बगालमा छ झिम्के ।
ट्याक्सीको साना गाडीहरूको लर्को खुब देखिन्छ त्यता हुँइकिरहेको । गेटमा प्रहरीको सोधपुछमा पास भएर जाने युवायुवतीको हुल झन् चर्को छ त्यही बाटोको पेटीमा ।
झिम्के आफ्नो झोला मिलाउँछ ।
'बीस किलो भन्दा बढ्ता लान पाइन्न । तेरो झोला त तीस किलो जत्तिको छ । मिला, केटा मिला !'
प्रभुरामले भन्यो ।
'काम नलाग्ने सब फाल्दे है झिम्के !'
प्रभुको उर्दी छ ।
'भरे फेरि माथि तौलादा बढी भए झमेला हुन्छ ।'
बोरिरहेछ प्रभुराम ।
झिम्केले झोलाको फस्नर वल्लोदेखि पल्लो छेउसम्म तान्यो । अनेक खिच्रिङमिच्रिङ छन् त्यो टुन्न मोटाएको झोलामा ।
'तेरो झोलाले भुाडी बोकेछ !'
'पुटुक्क परेको झोलाले बुहारी ल्याउने सामल हालेको होला नि ।'
'तेरो झोलामा दुनियाँ चकित हुने सामानको भिडभाड मात्रै छ जस्तो देख्छु म त !'
विहान लजमा साथीहरूले टिप्पणी गरेथे ।
अनि मेनपावरले लगाइदिएको माला र टीकामा सजिएर उनीहरू एयरपोर्ट हुर्रिएथे ।
घाँटीमा माला र निधारमा रातो टीका लाएपछि झिम्केलाई बल्ल विदेश जान लागेको भान भयो । उसको मन एकाएक गरुागो भयो । आँखाबाट आँसु आउला-आउला जस्तो भयो । उसका हातखुट्टा गले ।
प्रभुरामलाई नाइके बनाइएको थियो ।
मेनपावरले उसलाई समूहबारे भन्ने, अर्‍हाउने र सल्लाह दिने अधिकार दिएको थियो ।
'अरुको भन्दा तेरो झोला ठूलो देख्छु, केटा राम्ररी मिला है । भरे बित्थामा झ्याउ हुन्छ ।'
फेरि भन्यो प्रभुरामले झिम्केलाई ।
सबै फस्नर खोलेर फोला मिलाउन थाल्यो झिम्केले । अरु पनि आ-आˆना पोका पन्टुरा मिलाउन लागि परेको छन् । कोही डोरीले कस्दै छन्, कोही बिग्रेको चेन मिलाउँदै छन् ।
'जाडोमा काम लाग्छ !'
सानिमाले दिएको टोपी हातमा लिएर सम्झयो
'मलाई बिर्से पनि यो टोपीले तालाई मेरो माया गर्न यसले सम्झाउँछ झिम्के ।'
सानिमाले भनेकी थिइन् ।
हिँड्ने एक साता अघि आमाले त्यो कम्बल पट्याएर दिदै भनेकी थिइन् - ' झिम्के तिमेरु सबै सन्तान यसैमा हुक्र्यौ । मलाई आमाले मेरो बिहेमा दिनुभएको । यो तातो चीसो जेमा नि काम लाग्छ । बाबु तँ त यसमै कतिपटक लुकिबसकेको थिइस् । यो कम्बल लिएर जा हैं ! ओड्न नि हुन्छ, ओच्छ्याउन नि हुन्छ । सुँघ त, यसमा तँ नै गनाउँछस् । यसमा तेरै गन्ध बढ्ता छ ।'
झिम्केले आमाका कुरा एक-एक गरी मनमा गुन्यो । उसलाई त्यो कम्बलको झन् सारो माया लाग्यो । उसले त्यसलाई चपक्क समात्दै भन्यो - ओहो, यो फाले भनें त म मर्छु ! भो, यसलाई जे गरी नि लानु पर्छ ।'
झिम्केले झोलाको बाँयापट्टीको बाहिरी भागमा यसो छाम्यो । त्यहाँ पनि खिच्रिङमिच्रिङ रैछन् । उसले फस्नर फरर्र तान्यो ।
प्लास्टिकको सानो झोला रै'छ ।
'हन, के हो यो !'
भुत्भुताउँदै उसले झोला छाम्यो ।
उसले पल्लाघरकी मितिनी आमाले दिएको गुन्द्रुक सम्झेर भन्यो - 'ओहो मितिनी आमाको कोसेली कसरी ˆफ्याँक्नु ?'
झिम्केले त्यस पोकोलाई चलाएन ।
उसले त्यो पुरानो कुरो सम्झियो ।
'बाबु, तेरो मित मरिगो जङ्गलेहरूसँग लागेर । तेरो मितले गुन्द्रुक भनेपछि दुई थाल भात लडाउँथ्यो । तालाई यै गुन्द्रुक रै'छ मैले दिने चिनो । मलाई सम्झिने बाटो यै हुन्छ, लैजा बाबु यो गुन्द्रुक ।'
दायाँपट्टी अलिक उच्छिटिएको रै'छ झोला । झिम्केले यसो छामी हेर्‍यो । अलिक सारो रै'छ । उसले ठम्याउनै सकेन ।
'हैन के छ हा, यतातिर चैं ।'
उसले आफैंले आफैंलाई प्रश्न गर्‍यो । अनि बिस्तारै फस्नरको गाँठो तान्यो ।
कागजको थुागामा तीन पटक मोरेर राखिएको कुरा हेरेर ऊ एक पटक हाँस्यो ।
'हत्तेरिका, के गर्नु यी डल्ला ।'
उसले मनमनै भन्यो ।
तर नरिवल हेरिरहँदा उसले पाख्रिनकी भान्जीलाई सम्झ्यो । पाख्रिन उसको साथी थियो । भान्जीलाई उसले साथीकै घरमा देखेको थियो । उनीहरू एउटै कक्षाका साथी भए पछिल्लो पालि ।
'तिमी कहिले आउँछौं थाहा छैन । मसँग तिमीलाई दिने क्यै छैन । घरमा फलेका यिनै नरिवल हुन् । नरिवलभित्रको पानी भनेको मेरो सम्झना हो ,बाहिरको नरिवल भनेको मेरो शरीर हो । तिमीले पानी मात्र खाने कि, बाहिरको बोक्रो खाने ? निर्णय तिम्रो ।'
यति भनेर आँखामा आँसु भरेर ऊ एकोहोरो गएकी थिई ।
त्यो टुहुरी केटीलाई झिम्केले एकनासले हेरेको थियो । आज त्यसको उपहार यो झोलाबाट कसरी फ्याक्ने ? ऊ अलमल्ल पर्‍यो ।
झिम्केले भन्यो - 'होइन, यो मन छुने कोसेली कसरी फ्याक्नु हुन्न ।'
'संसारका सबै राम्रा आइमाई रिसाएका दिन, यो संसार नरक समान हुनेछ ।' एक दिन उसले पाख्रिनकी भान्जीको अनुहार हेरेर कक्षामा भनेथ्यो ।
नरिवल थन्काउँदा उसले एक पटक पाख्रिनकी भान्जीको सुन्दर अनुहार सम्झेर मन उदास बनायो । छातीमा त्यै सारा नरिवलले हिर्काएको बेदना बल्झियो ।
लामो झोलाको अगाडिपट्टि पुटुस्स थियो ।
झिम्केले दुई मुठी फाक्यायो र भन्यो- 'मनमायाको यो कोसेली फ्याक्नु होला र ! हैन, अरुथोक नै मिल्काउँला बरु । अहिले चैं यसलाई थन्काउँछु ।'
तीनवटा पाइन्ट रहेछन् । तिनलाई उसले खराखरी गन्यो । त्यस मुन्तिर उसले मोटो डायरी राखेको रहेछ । ऊ कहिलेकाँही यसो मनका गन्थन लेखिटोपल्थ्यो ।
सरर्र पल्टायो पनि । एक पेजममा लेखेको रै'छ -'विदेशको स्याउ भन्दा स्वदेशको काँचो वेल मीठो, अर्काको जहाजभन्दा आफ्नै आँगनको खच्चड छिटो !'
अगाडिपट्टी एउटा ठूलो फ्रेम भएको फोटो रै'छ । त्यहाँ झिम्केका बा थिए, जुँगामुठे अनुहारमा डरलाग्दा ।
झिम्केले झोलाबाट कुनै सामान फ्याक्न सकेन । उसले फ्याक्ने सामान केही पाउँदै पाएन ।
उसले मनमनै भन्यो - 'बा, म आँफैं त्यहाँ फ्याँकिइन्छु कि ?'
फोटोका बासँग झिम्केले आँखा जुधाइरहन सक्तैं-सकेन । उसले भरिएको झोला हेर्दै रित्तो पायो आफूलाई ।